Bugs & Glitch – REDPlayer
ကျွန်တော်တို့ ဂိမ်းတွေဆော့ကြတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဂိမ်းဆော့ရင်း glitch နဲ့ bug ဆိုတာမျိုးက ကြားဖူးလာကြပါလိမ့်မယ်၊ ကြုံလည်း ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းတွေဟာလည်း တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ တစ်ခြား application တွေ software တွေလိုပဲ Programming language တွေဖြစ်တဲ့ C++, java နဲ့ apple ဘက်မှာဆိုရင်လည်း swift နဲ့ရေးကြရပါတယ်။ ဒီလိုရေးကြတဲ့အခါ program ကိုရေးတဲ့ line တိုင်းက အမှားမကင်းကြပါဘူး။ ဒီလို programming ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အမှားတစ်ခုခု၊ ပုံမှန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုတော့ပဲ မမျှော်လင့်တဲ့ အပြုအမူမျိုး ဖြစ်လာတာကို glitch/bug လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ခဏတာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ များသောအားဖြင့် programmer တွေကဒါတွေကိုပြန်လိုက်ရှာပြီး ပြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်သွားရင်တော့ ဆောင်းပါကပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ ဖြစ်တတ်တဲ့ bugs အမျိုးအစားတွေကို အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲကြည့်ရအောင်၊
မြန်မာလိုတော့ “ပြုတ်ကျတယ်” “ရပ်သွားတယ်” ဒါမျိုးပဲပြောနေဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့နေရင်း ဘယ်လို စာသားမှ မပေါ်လာပဲ ဘာမှ အကြောင်းမကြားပဲ ရုတ်တရက် ဂိမ်းထဲကထွက်သွားတာ၊ ဘာမှနှိပ်လို့မရတော့ပဲ ရပ်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေကိုခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ အခန်းနစ်ခန်းကနေ နောက်တစ်ခန်းကိုကူးတဲ့ အချိန်တွေ မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက battle ဆိုင်နေတဲ့ အချိန်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် စကားပြောနေရင်း option A နဲ့ B ပေးထားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ A ကိုရွေးလိုက်တိုင်း ဂိမ်းကဆက်မသွားတော့ပဲ ဘာမှနှိပ်မရပဲ ရပ်သွားတာမျိုးတွေရောပေါ့။ save လုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်း ပြန်တက်မလာတာလည်း အပါအဝင်ပေါ့။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့ bug ကတော့ ဂိမ်းရပ်သွားတာ ထွက်သွားတာ တွေမဖြစ်ပဲ၊ ဇာတ်လမ်းသွားအတိုင်းရှေ့ဆက်လို့မရတော့တာမျိုးပါ။ ဥပမာ. Elder Scroll : Skyrim မှာဆိုရင် NPC တစ်ကောင်ပျောက်နေတဲ့ quest တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုရှာတွေ့ရမယ့် နေရာမှာ ကိုယ်ကရောက်နေပေမယ့်လည်း ကိုယ်ရောက်နေကြောင်းမသိတော့ အဲ့ဒီ့ NPC က အလုပ်အလုပ်ပါဘူး။ ဒီတော့ quest ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးပေါ့။ တစ်ချိန်က Sacred မှာလည်း အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာရှိပါတယ်။ ကန္တာရ ထဲကိုရောက်တဲ့အခါ ရှာတွေ့ရမယ့် ခွက်ကလေးတစ်ခုက မပေါ်လာတာမျိုးပါ။ ဒီ bug တွေကိုတော့ patch တွေဘာတွေထွက်လာတာမရှိပဲ command line ခေါ်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်။ PC တွေမှာဆိုရင်ပေါ့။
ဒီလို အဖြစ်လေးတွေကတော့ quest ကိုအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် gameplay ပိုင်းကိုထိခိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ – zombile game တစ်ခုမှာ zombile ကို kill ပြီးမှ အဲ့ zombie ကတံခါးကြားညပ်ပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ၊ horror game တွေမှာ တံတိုင်းထဲညပ်နေတာမျိုးတွေကျတော့ ဂိမ်းက မလိုအပ်ပဲ ရုန်းရတဲ့အတွက် fps ကျပြီး စက်လေးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ player အတွက်လည်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာပေါ့။ များသောအားဖြင့်တော့ clipping ဖြစ်တာတွေကိုခေါ်ကြပါစို့၊ clipping ဆိုတာက ပစ္စည်းတွေက နံရံနဲ့ မြေကြီးတွေကို မသိတော့တာပါ။
ဒီလို bug တွေကတော့ gameplay နဲ့ quest ကိုဘာမှမထိခိုက်ပါဘူး။ အသေးအဖွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်၊ စကားပြောတဲ့အခန်းတွေမှာ ပါးစပ်မလှုပ်တာကနေ battle တွေမှာ လည်ပင်းပြတ်လိုပြတ်လိုက်ခုတ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမျိုးပေါ့။ Fallout မှာကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Assassin’s Creed မှာလည်း နာမည်ကြီး မျက်နှာမပါလာတာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့ ဂိမ်းတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်ရင် ရုပ်ထွက်တွေနဲ့တင် ချက်ချင်းကြီး သရဲဂိမ်းဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့။ မထိခိုက်ဘူးဆိုပေမယ့် player ရဲ့ အမြင်ကိုတော့ ဒုက္ခပေးပါတယ်။
openworld game တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ အခန်းကိုဖောက်ပြီးမြင်နေရတာ၊ မြက်ခင်းတွေက တံခါးပေါ်ရောက်နေတာ texture လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေရဲ့ အမြင်တွေမှားနေတာတွေကိုခေါ်ပါတယ်။ gameplay နဲ့ questline တွေကို မထိခိုက်ဘူးဆိုပေမယ့် အမြင်အရတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိရအောင် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ character တွေရဲ့ skin တွေပေါက်နေတာမျိုးလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။
ဂရုစိုက်တဲ့ developer တွေကတော့ patch နဲ့ fix တွေထုတ်ပြီးတော့ ပြင်ဖို့ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း ကြားမှာ hacker နဲ့ modder တွေက ဘယ်လိုပြင်လို့ရကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ ဘယ်ဂိမ်းမှ bugs ရန်ကမလွတ်ပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ ဂိမျးတှဆေော့ကွတယျ၊ တဈခါတဈလမှော ဂိမျးဆော့ရငျး glitch နဲ့ bug ဆိုတာမြိုးက ကွားဖူးလာကွပါလိမျ့မယျ၊ ကွုံလညျး ကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ဂိမျးတှဟောလညျး တကယျတော့ ကြှနျတျောတို့သုံးနတေဲ့ တဈခွား application တှေ software တှလေိုပဲ Programming language တှဖွေဈတဲ့ C++, java နဲ့ apple ဘကျမှာဆိုရငျလညျး swift နဲ့ရေးကွရပါတယျ။ ဒီလိုရေးကွတဲ့အခါ program ကိုရေးတဲ့ line တိုငျးက အမှားမကငျးကွပါဘူး။ ဒီလို programming ကွောငျ့ဖွဈလာတဲ့ အမှားတဈခုခု၊ ပုံမှနျရညျရှယျထားတဲ့ အတိုငျးလုပျဆောငျခွငျးမပွုတော့ပဲ မမြှျောလငျ့တဲ့ အပွုအမူမြိုး ဖွဈလာတာကို glitch/bug လို့ချေါပါတယျ။ ဒါတှကေ ခဏတာဖွဈနမှောဖွဈပွီးတော့ မြားသောအားဖွငျ့ programmer တှကေဒါတှကေိုပွနျလိုကျရှာပွီး ပွငျကွပါလိမျ့မယျ။ အသေးစိတျသှားရငျတော့ ဆောငျးပါကပွီးမှာမဟုတျဘူး။
ဒီတော့ ဖွဈတတျတဲ့ bugs အမြိုးအစားတှကေို အကွမျးအားဖွငျ့ အမြိုးအစားခှဲကွညျ့ရအောငျ၊
မွနျမာလိုတော့ “ပွုတျကတြယျ” “ရပျသှားတယျ” ဒါမြိုးပဲပွောနဖွေဈပါတယျ။ ဆော့နရေငျး ဘယျလို စာသားမှ မပျေါလာပဲ ဘာမှ အကွောငျးမကွားပဲ ရုတျတရကျ ဂိမျးထဲကထှကျသှားတာ၊ ဘာမှနှိပျလို့မရတော့ပဲ ရပျသှားတဲ့ ကိစ်စတှကေိုချေါပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ အခနျးနဈခနျးကနေ နောကျတဈခနျးကိုကူးတဲ့ အခြိနျတှေ မှာဖွဈတတျပါတယျ။ နောကျတဈခုက battle ဆိုငျနတေဲ့ အခြိနျတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ စကားပွောနရေငျး option A နဲ့ B ပေးထားတဲ့အခါမြိုးတှမှော A ကိုရှေးလိုကျတိုငျး ဂိမျးကဆကျမသှားတော့ပဲ ဘာမှနှိပျမရပဲ ရပျသှားတာမြိုးတှရေောပေါ့။ save လုပျထားတဲ့ ဂိမျး ပွနျတကျမလာတာလညျး အပါအဝငျပေါ့။
ဒီလိုဖွဈတဲ့ bug ကတော့ ဂိမျးရပျသှားတာ ထှကျသှားတာ တှမေဖွဈပဲ၊ ဇာတျလမျးသှားအတိုငျးရှဆေ့ကျလို့မရတော့တာမြိုးပါ။ ဥပမာ. Elder Scroll : Skyrim မှာဆိုရငျ NPC တဈကောငျပြောကျနတေဲ့ quest တဈခုရှိခဲ့ပါတယျ။ သူ့ကိုရှာတှရေ့မယျ့ နရောမှာ ကိုယျကရောကျနပေမေယျ့လညျး ကိုယျရောကျနကွေောငျးမသိတော့ အဲ့ဒီ့ NPC က အလုပျအလုပျပါဘူး။ ဒီတော့ quest ကိုဆကျသှားလို့မရဘူးပေါ့။ တဈခြိနျက Sacred မှာလညျး အဲ့လိုဖွဈဘူးတာရှိပါတယျ။ ကန်တာရ ထဲကိုရောကျတဲ့အခါ ရှာတှရေ့မယျ့ ခှကျကလေးတဈခုက မပျေါလာတာမြိုးပါ။ ဒီ bug တှကေိုတော့ patch တှဘောတှထှေကျလာတာမရှိပဲ command line ချေါပွီးပွငျလို့ရပါတယျ။ PC တှမှောဆိုရငျပေါ့။
ဒီလို အဖွဈလေးတှကေတော့ quest ကိုအနှောကျအယှကျမပေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ gameplay ပိုငျးကိုထိခိုကျတာမြိုးပေါ့။ ဥပမာ – zombile game တဈခုမှာ zombile ကို kill ပွီးမှ အဲ့ zombie ကတံခါးကွားညပျပွီး ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျ ဖွဈနတောမြိုးတှေ၊ horror game တှမှော တံတိုငျးထဲညပျနတောမြိုးတှကေတြော့ ဂိမျးက မလိုအပျပဲ ရုနျးရတဲ့အတှကျ fps ကပြွီး စကျလေးတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ပွီးတော့ player အတှကျလညျး စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈရတာပေါ့။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ clipping ဖွဈတာတှကေိုချေါကွပါစို့၊ clipping ဆိုတာက ပစ်စညျးတှကေ နံရံနဲ့ မွကွေီးတှကေို မသိတော့တာပါ။
ဒီလို bug တှကေတော့ gameplay နဲ့ quest ကိုဘာမှမထိခိုကျပါဘူး။ အသေးအဖှဲတှပေဲဖွဈပါတယျ၊ စကားပွောတဲ့အခနျးတှမှော ပါးစပျမလှုပျတာကနေ battle တှမှော လညျပငျးပွတျလိုပွတျလိုကျခုတျနတေဲ့ ကိစ်စတှမြေိုးပေါ့။ Fallout မှာကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ Assassin’s Creed မှာလညျး နာမညျကွီး မကျြနှာမပါလာတာရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ တဈခြို့ ဂိမျးတှမှောအဲ့လိုဖွဈရငျ ရုပျထှကျတှနေဲ့တငျ ခကျြခငျြးကွီး သရဲဂိမျးဖွဈသှားတာမြိုးပေါ့။ မထိခိုကျဘူးဆိုပမေယျ့ player ရဲ့ အမွငျကိုတော့ ဒုက်ခပေးပါတယျ။
openworld game တှမှောပဲဖွဈဖွဈ ဘယျမှာပဲ ဖွဈဖွဈပါ အခနျးကိုဖောကျပွီးမွငျနရေတာ၊ မွကျခငျးတှကေ တံခါးပျေါရောကျနတော texture လို့ချေါတဲ့ မကျြနှာပွငျတှရေဲ့ အမွငျတှမှေားနတောတှကေိုချေါပါတယျ။ gameplay နဲ့ questline တှကေို မထိခိုကျဘူးဆိုပမေယျ့ အမွငျအရတော့ တဈခါတဈလေ ဘယျရောကျနမှေနျးမသိရအောငျ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ character တှရေဲ့ skin တှပေေါကျနတောမြိုးလညျး ကွုံရပါလိမျ့မယျ။
ဂရုစိုကျတဲ့ developer တှကေတော့ patch နဲ့ fix တှထေုတျပွီးတော့ ပွငျဖို့ကွိုးစားကွပါလိမျ့မယျ။ တဈခြို့တှကေတြော့လညျး ကွားမှာ hacker နဲ့ modder တှကေ ဘယျလိုပွငျလို့ရကွောငျးပွောပါလိမျ့မယျ။ သခြောတာကတော့ ဘယျဂိမျးမှ bugs ရနျကမလှတျပါဘူး။
Tags glossary pc tech